Amụma Nzuzo - FOREXFUNDS.COM
Ị nọ ebe a: Home / amụma nzuzo
Ụbọchị bara uru: January 1, 2021
FOREXFUNDS.COM (“anyị”, “anyị”, ma ọ bụ “nke anyị”) na-arụ ọrụ na weebụsaịtị weebụsaịtị FOREXFUNDS.COM (“Ọrụ”).
Peeji a na-agwa gị amụma anyị gbasara mkpokọta, ojiji, na ikpughe nke data onwe onye mgbe ị na-eji Ọrụ anyị na nhọrọ ị jikọtara na data ahụ. Amụma nzuzo a maka nBet.com kwadoro ya FreePrivacyPolicy.com.
Anyị na-eji data gị iji nye ma melite Ọrụ ahụ. Site n'iji Ọrụ ahụ, ị ​​kwenyere na ịnakọta na ojiji nke ozi dabere na iwu a. Ọ gwụla ma akọwapụtara ya na Nzuzo Nzuzo a, usoro eji mee Nzuzo Nzuzo a nwere otu ihe ha pụtara na Usoro na Ọnọdụ anyị, nweta site na nBet.com
Anyị na-anakọta ọtụtụ ozi dịgasị iche maka nzube dị iche iche iji nye ma melite Ọrụ anyị n'aka gị.
Mgbe anyị na-eji Service anyị, anyị nwere ike ịjụ gị ka ị nye anyị ụfọdụ ozi nkeonwe nwere ike iji kọntaktị ma ọ bụ mata gị ("Data nkeonwe"). Ozi nwere ike ịchọta, ma ọ gaghị ejedebere na:
Kuki na Njikere Data
Anyị nwekwara ike ịnakọta ozi otú e si enweta ọrụ ma jiri ("Data Usage"). Ngwa ojiji a nwere ike ịgụnye ozi dịka adreesị IP Protocol gị (dịka adreesị IP), ụdị ihe nchọgharị, mbipute nchọgharị, ibe nke Ọrụ anyị na ị gara, oge na ụbọchị nke nleta gị, oge eji na ibe ndị ahụ, pụrụ iche njirimara ngwaọrụ na data nchọpụta ndị ọzọ.
Data Ndepụta & Kuki
Anyị na-eji kuki na teknụzụ nsuso yiri ya iji soro ọrụ na Ọrụ anyị ma jide ụfọdụ ozi.
Kuki bụ faịlụ na ntakịrị data nke nwere ike ịgụnye njirimara pụrụ iche ahaghị. A na-eziga kuki na ihe nchọgharị gị site na weebụsaịtị ma debe na ngwaọrụ gị. Teknụzụ na-eme nnyocha na-ejikwa ya bụ mgbama, mkpado, na edemede iji nakọta ma soro ozi na iji melite ma nyochaa Ọrụ anyị.
Ị nwere ike ịkụzi ihe nchọgharị gị iji jụ kuki niile ma ọ bụ gosipụta mgbe a na-eziga kuki. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnabataghị kuki, ịnwere ike ghara iji ụfọdụ akụkụ nke Ọrụ anyị.
Oge Kuki. Anyị na-eji Cookies Oge iji rụọ ọrụ anyị.
Cookies Mmasị. Anyị na-eji Kuki mmasị na-echeta mmasị gị na ntọala dị iche iche.
Kuki Nchedo. Anyị na-eji Kuki Nchedo maka ebumnuche nche.
nBet.com jiri data anakọtara maka ebumnuche dị iche iche:
Iji nye ma debe Ozi
Iji gwa gị gbasara mgbanwe na Service anyị
Iji nye gị ohere ịkekọrịta na atụmatụ mmekọrịta nke Ọrụ anyị mgbe ị na-ahọrọ ime otú ahụ
Iji nye ndị nlekọta na nkwado ndị ahịa
Iji nye ntule ma ọ bụ ozi bara uru ka anyị nwee ike melite Service
Iji nyochaa ojiji nke Ọrụ
Enwere ike ibufe ozi gị, gụnyere Personal Data, na - ma nọgide na-enwe - kọmputa nke dị n'èzí obodo gị, ógbè, obodo ma ọ bụ ikike ọchịchị ndị ọzọ ebe iwu nchedo data nwere ike ịdị iche na nke ndị nwe obodo gị.
Ọ bụrụ na ị nọ n'èzí United States ma họrọ inye anyị ozi, biko mara na anyị na-ebufe data, gụnyere Personal Data, gaa United States ma dezie ya n'ebe ahụ.
Nkwekọrịta gị na Nzuzo Nzuzo a na-esochi nrubeisi nke ozi dị otú ahụ na-anọchite anya nkwekọrịta gị na ngbanwe ahụ.
nBet.com ga - eme ihe niile dị mkpa iji hụ na e lebara data gị anya nke ọma yana dabere na Iwu Nzuzo a ma ọ nweghị nnyefe nke Ozi Nkeonwe gị ga-eme na nzukọ ma ọ bụ mba ọ gwụla ma enwere njikwa zuru oke na nchekwa gụnyere nchekwa nke data gị na ozi nkeonwe ndị ọzọ.
nBet.com nwere ike igosipụta nkeonwe nkeonwe gị na ezigbo nkwenkwe na ụdị omume ahụ dị mkpa iji:
Iji mezuo ọrụ iwu
Iji kpuchido ma chebe ikike ma ọ bụ ihe onwunwe nke nBet.com
Iji gbochie ma ọ bụ nyochaa mmejọ na-eme omume na Service
Iji kpuchido nchekwa nke onwe onye ọrụ nke Ọrụ ma ọ bụ ọha na eze
Iji chebe megide ụgwọ iwu
Nchebe nke Data
Nche nke data gị dị anyị mkpa, mana cheta na ọ dịghị usoro ịnyefe n'Intanet, ma ọ bụ usoro nke nchekwa kọmputa bụ 100% echekwa. Ka anyị na-agbalịsi ike iji ụzọ azụmahịa kwadoro iji kpuchie Data nke Onwe gị, anyị enweghị ike ikwu na nchedo zuru oke.
Anyị nwere ike iji ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị mmadụ n'otu n'otu iji kwado ọrụ anyị ("Ndị na-enye ọrụ"), iji nye Service maka nnọchite anyị, ịrụ ọrụ metụtara ọrụ ma ọ bụ nyere anyị aka n'ịtụle otú e si eji Service anyị.
Ndị nke atọ a nwere ohere ịnweta Personal Data naanị iji rụọ ọrụ ndị a na nnọchite anyị ma bụrụ iwu na ị gaghị egosipụta ma ọ bụ jiri ya maka nzube ọ bụla.
Njikọ Na saịtị ndị ọzọ
Ozi anyị nwere ike ịnwe njikọ na saịtị ndị ọzọ na-anaghị arụ ọrụ anyị. Ọ bụrụ na ị pịnye njikọ nke atọ, a ga-eduzi gị na saịtị nke ndị ọzọ ahụ. Anyị na-agba gị ume ka ị nyochaa Nzuzo Nzuzo nke saịtị ọ bụla ị gara.
Anyị enweghị ike ịchịkwa ma nwewe ọrụ maka ọdịnaya, nzuzo ma ọ bụ omume nzuzo nke saịtị ma ọ bụ ọrụ atọ ọ bụla.
Ọrụ anyị adịghị agwa onye ọ bụla nọ n'okpuru afọ 18 ("Ụmụaka").
Anyị ejighị nlezianya nakọta ozi nkeonwe onye ọ bụla n'okpuru afọ 18. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta na ị maara na ụmụ gị enyela anyị Personal Data, biko kpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị amata na anyị anakọtara Personal Data site na ụmụaka n'enweghị nkwenye nke nkwenye ndị nne na nna, anyị na-eme ihe iji wepu ozi ahụ na sava anyị.
Anyị nwere ike imelite Nzuzo Nzuzo anyị site n'oge ruo n'oge. Anyị ga-agwa gị mgbanwe ọ bụla site na ịmepụta Nzuzo Nzuzo ọhụrụ na ibe a.
Anyị ga-eme ka ị mara site na email na / ma ọ bụ ọkwa a ma ama na Ọrụ anyị, tupu mgbanwe ahụ dị irè ma melite "ụbọchị dị irè" na n'elu Nzuzo Nzuzo a.
A gwara gị ka ị nyochaa Nzuzo Nzuzo a kwa oge maka mgbanwe ọ bụla. Mgbanwe na Nzuzo Nzuzo a dị irè mgbe a na-eziga ha na ibe a.
Site na email: [email protected]